शुसान्त आत्महत्यामा नया खुलाशा : डायरीबाट प्रमाण मेटाइयो, प्रहरी माथी प्रश्न ! - सिम्रिक खबर
शुसान्त आत्महत्यामा नया खुलाशा : डायरीबाट प्रमाण मेटाइयो, प्रहरी माथी प्रश्न !
शुसान्त आत्महत्या प्रकरणमा केही समय यता नया नया खुलाशाहरु भइरहेका छन् । यसैबिच हालै मात्रै शुसान्तले अरु कसैलाइ पनि नदेखाएका डायरीहरु फेला परेका छन् । जसमा महत्वपुर्ण ६ पेजहरु गायब बनाइएका छन् ।
शुसान्तको एकदम निकट मानिएका एक ब्यक्तिले उनका निजि डायरी भेटिएको तर त्यसमा केही पेजहरु च्यातिएका छन् ।
शुसान्तका साथी सिद्धार्थ पिठानीले मुम्बइ प्रहरीले आफ्ना अघि ती पेजहरु नच्यातेको बताए ।
“प्रहरीले हामीसँग डायरीको बारेमा सोधेको थियो, हामीले उनका २० नोटबुकहरु दिएका थियौँ ।”
उनले पेपरका टुक्राहरु दराजमा देखेको तर त्यसअघि डायरीमा कुनै पनि पेज नच्यातिएको वकिल सँग बयान दिएका थिए । तर उनको वयान माथी पनि प्रश्न उठेको छ । शुसान्तको परिवारका वकिल विकास सिँहले उनको वयानमा प्रश्न खडा गर्दै सिद्धार्थ शुसान्तको घर पुगेपछि केही पेजहरु च्यातिएको शुसान्तकी बहिनी मीतु सिँहले देखेको बताए ।
शुसान्तले उक्त डायरीमा आफ्नो जीवनका महत्वपुर्ण कुराहरु लेखेका थिए । उनले आफ्ना फिल्म, बिभिन्न मिडियाले लेखेका आर्टिकल्स, अफवाह, उनकी पहिलाकी प्रेमिका अंकिता लोखंडे सँगको ब्रेकप तथा चक्रवर्ती सँगको आफ्नो सम्बन्धको बारेमा लेखेका थिए ।
तर उनको यो डायरीमा प्रहरीले गरेको जाँचमा प्रश्न उठेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।